Izera re digital riri pose pose, riri kukura, uye riri kuchinja zvingaita kune vanotsvakurudza.
Pfungwa inokosha yebhuku rino ndeyekuti gore rejigiramu rinoita mikana mitsva yekutsvakurudza kwevanhu. Vatsvakurudzi vanogona kuona maitiro, kubvunza mibvunzo, kuedza miedzo, nekushandira pamwe nenzira dzaisingakwanisi munguva yapfuura yapfuura. Pamwe nemikana iyi mitsva inouya mungozi mitsva: vatsvakurudzi vanogona kukuvadza vanhu nenzira dzisingakwanisi munguva yapfuura yapfuura. Mhedziso yemikana iyi uye njodzi ndeyekushandura kubva panguva yekufananidza kusvika kune rimwe dijiti. Iko kushanduka hakuna kumboitika kamwechete-sekushanduka kwechiedza kuenderera mberi-uye, chaizvoizvo, haisati yakwana. Zvisinei, takaona zvakakwana ikozvino kuziva kuti chimwe chinhu chikuru chiri kuitika.
Imwe nzira yekucherechedza iyi shanduko ndeyokutsvaga kuchinja muupenyu hwako hwezuva nezuva. Zvinhu zvakawanda muhupenyu hwako izvo zvaiwanzove seanalogo zvino iko digital. Zvichida waimboshandisa kamera ine firimu, asi ikozvino iwe unoshandisa kamera kamera (iyo inogona kunge iri chikamu chefoni yako yakanaka). Zvichida waiwanzoverenga pepanhau remuviri, asi ikozvino unoverenga pepanhau rekuIndaneti. Zvichida waiwanzobhadhara zvinhu nemari, asi zvino iwe unobhadhara nekadhi rechikwereti. Muchiitiko chimwe nechimwe, kuchinja kubva kune analogo kusvika kudijita kunoreva kuti mamwe mashoko pamusoro pako ari kutorwa uye akachengeterwa digital.
Ichokwadi, kana pachitariswa muhutano, migumisiro yekushanduka iri kushamisa. Kuwanda kwehuwandu munyika muno kuwedzera nokukurumidza, uye humwe huwandu hwemashoko aya hunochengeterwa nhamba, iyo inoita kuti kuongorora, kutapurirwa, nekubatana (chifananidzo 1.1). Zvose izvi ruzivo rwemagetsi zvakasvika pakuzonzi "big data." Pamusoro pekuputika uku kwedhigital data, kune kukura kwakafanana mukusvika kwekushandisa kombiyuta (chifananidzo 1.1). Aya maitiro-kuwedzera kwemari yedhipatimendi uye kuwedzerwa kwekuwanika kwekombiyuta-inogona kuenderera mberi mune ramangwana rakatarisika.
Mufananidzo 1.1: Nhamba yekuchengetedza ruzivo uye simba rekushandisa iri kuwedzera zvinoshamisa. Zvakare, kuchengetwa kwemashoko zvino yava kungoita digital. Iko kushandura kunopa mikana inoshamisa yevanotsvakurudza vevanhu. Yakagadzirirwa kubva kuna Hilbert and López (2011) , mifananidzo 2 ne5.
Nechinangwa chekutsvakurudza kwevanhu, ndinofunga kuti chinonyanya kukosha chezera re digital ndiyo makombiyuta kose-kose . Kutanga semakamuri-mizinga yakakura yaive inowanikwa chete kune hurumende nemakambani makuru, makombiyuta ave achiderera muhukuru uye achiwedzera mu ubiquity. Imakore gumi nerimwe kubva kuma1980 yakaona rudzi idzva rwekombiyuta rinobuda: makombiyuta evanhu, makombiyuta, mafoni akachenjera, uye iye zvino akabatanidzwa mukati me "Internet yezvinhu" (kureva, makombiyuta mukati mezvigadzirwa zvakadai semotokari, maziso, uye thermostats) (Waldrop 2016) . Inowedzera, makombiyuta aya asingawanzo anoita zvinopfuura kungoverenga; ivo vanoonawo, vanochengetedza, uye vanotumira mashoko.
Kune vatsvakurudzi, zvinorehwa nekuvapo kwemakombiyuta kwose kwose zviri nyore kuona paIndaneti, nzvimbo yakanyatsotaridzika uye inoita kuti ive nekuedza. Semuenzaniso, dare rekutsvaga rinogona kutora nyore nyore data yakajeka pamusoro pekutengesa kwemamiriyoni evatengi. Uyezve, inogona nyore nyore kuisa mapoka emakambani kuwana zviitiko zvakasiyana-siyana zvekutenga. Iko kukwanisa kurongedza pamusoro pekutsvaga kunoreva kuti mabhizimusi epaIndaneti anokwanisa nguva dzose kutarisa randomized experiment. Zvechokwadi, kana iwe wakambotenga chero chinhu kubva pane chekutsvaga muIndaneti, unhu hwako hwave uchitarirwa uye iwe unenge wakangove uri mubatanidzwa mukuedza, kana iwe uchizviziva kana kwete.
Izvi zvakazara zvakajeka, nyika yakazara zvisingabviri kuitika paIndaneti; zviri kuramba zvichiitika kwose kwose. Zvitoro zvepanyama zviri kutotora mashoko akawanda ekutenga, uye varikudziridza zvivako zvekuchengetedza zviyero kuti vaone kutengesa kwevatengi uye kuenzanisa kuedza muitiro wenguva dzose yebhizimisi. I "Internet yezvinhu" zvinoreva kuti mufambiro wenyika ino huchawedzerwa kutorwa nemajena ejedi. Mune mamwe mazwi, kana iwe uchifunga nezvekutsvakurudza kwevanhu munharaunda yejedi iwe haufaniri kungofunga paIndaneti , unofanira kufunga kwose kwose .
Mukuwedzera pakuita kuti chiyero chekuzvibata uye kushandiswa kwekurapa kwemaitiro, chirwere chemadhini chakagadzirawo nzira itsva dzevanhu kuti vataure. Aya maitiro matsva ekukurukurirana anobvumira vatsvakurudzi kuti vashandise kutsvakurudza kutsva uye kugadzira kubatana kukuru pamwe nevamwe vavo uye vanhu vose.
Munhu anokakavara angangotaura kuti hapana chimwe chezvikwaniro izvi chaicho chitsva. Izvi zvinoreva kuti, munguva yakapfuura, pane zvimwe zvakabudirira zvikuru muhutano hwevanhu kuti vataure (semuenzaniso, telegraph (Gleick 2011) ), uye makombiyuta ave achikurumidza kukurumidza kusvika kuma1960 (Waldrop 2016) . Asi izvo zvinokanganiswa izvi ndezvokuti pane imwe nguva zvimwe zvakafanana zvinova chimwe chinhu chakasiyana. Heino mufananidzo wandinoda (Halevy, Norvig, and Pereira 2009; Mayer-Schönberger and Cukier 2013) . Kana iwe ukakwanisa kutora mufananidzo webhiza, iwe une mufananidzo. Uye, kana iwe ukakwanisa kutora mifananidzo 24 yebhiza nechipiri, iwe une movie. Zvechokwadi, firimu inongova mifananidzo yemifananidzo chete, asi kungofungidzira zvakanyanyisa kunogona kutaura kuti mifananidzo nemavhidhiyo zvakafanana.
Vanotsvakurudza vari mukugadzira kuita shanduko yakafanana nekushandura kubva pamufananidzo kusvika ku cinematography. Kuchinja uku, zvisinei, hazvirevi kuti zvose zvatakadzidza munguva yakapfuura zvinofanira kuregererwa. Kungofanana nemitemo yekunyora mafirimu inozivisa avo nezvemafirimu, nheyo dzekutsvakurudza kwevanhu dzakagadzirwa mumakore zana apfuura dzichazivisa hutsvaga hutsva hwevanhu hunowanikwa mumakore zana anotevera. Asi, kuchinja kunoreva zvakare kuti hatifaniri kungoramba tichiita chinhu chimwe chete. Pane kudaro, tinofanira kubatanidza nzira dzekare uye nehutano hwezvino uye remangwana. Semuenzaniso, kutsvakurudza kwaJoshua Blumenstock uye vaaishanda navo kwaiva musanganiswa wekutsvakurudza kwetsika yezvakaitwa neavo vamwe vangave vachiti data science. Zvose izvi zvinoshandiswa zvaidiwa: uye mhinduro dzekutsvaga kana nhepfenyuro dzekutsvaga pachavo dzakanga dzakakwana kuti dzigadzire maonero ekukwirira kwehurombo. Kunyanya kakawanda, vatsvakurudzi vevanhu vanodikanwa vanofananidza kusanganisa mazano kubva mune zvemagariro evanhu uye nesayenzi yepasita kuitira kuti vashandise mikana yezera re digital; uye kuswedera oga kunenge kwakakwana.